Sinikeza anhlobonhlobo amashidi acrylic plexiglass anombala. Imibala enemibala ejwayelekile ehlanganisa amashidi e-acrylic amhlophe, omnyama, opal, obomvu, oluhlaza okotshani, ophuzi, wezinyo lendlovu, onsundu, osawolintshi, oluhlaza okwesibhakabhaka kanye ne-fluorescent (pls bheka amaketanga ethu ombala). Ngokujwayelekile asetshenziselwa izimpawu nezinhlelo zokusebenza zokukhanyisa, lawa mashidi e-acrylic angashintshashintsha futhi angabonakali, imibala ekhanyayo ingadlulisela ukukhanya uma ikhanyisiwe. Njengoba i-plexiglass ikhula ngokuqina, inani lokukhanya elidlulayo liyancipha.
Ishidi le-acrylic elinemibala yophawu litholakala ukusuka ku-1.8-30mm(1/16" -1” ) eliwugqinsi futhi liza ngosayizi abajwayelekile.
Ishidi lombala lilungele ukucutshungulwa komthamo omncane, kukhona ukuguquguquka okungenakuqhathaniswa kombala nokuthungwa kwendawo, kanye nokucaciswa komkhiqizo okuphelele ngezinjongo ezikhethekile ezahlukahlukene.
Inani elincane le-oda 1.5 amathani
HS IKHODI 39205100
Okufakiwe Yokuxhumana Ifilimu ye-PE noma iphepha elinsundu ezinhlangothini zombili zeshidi; 1.5 amathani kuphalethi eyodwa
Isikhathi sokuthumela izinsuku 15-30
Inkokhelo Imigomo TT, LC AT SIGHT, DP AT SIGHT
Supply Amandla 1000 amathani/ngenyanga
◇ Ukwenziwa Kalula: Ishidi le-Acrylic lingapendwa, lihluzwe ngosilika, livalwe ngevacuum, futhi lingasaha, libhobhodwe, futhi lifakwe ngomshini ukuze lakhe noma yimuphi ukwakheka lapho lishisiswe lifinyelele esimweni esithambile.
◇ Isisindo esilula: isisindo esingaphansi kwesigamu njengengilazi.
◇ Ukumelana nesimo sezulu esihle kakhulu ngokumelene nokuguquguquka nokuguqulwa.
◇ Ukumelana nomthelela okhethekile: ukumelana nomthelela omkhulu izikhathi ezingu-7-16 kunengilazi.
◇ Ukumelana okuhle kakhulu kwamakhemikhali nokokusebenza: ukumelana ne-asidi ne-alkali.